Pigtail ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာရောင်ခြည်။ Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ diode
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ Diode သည် InGaAsP / InP CWDM MQW-DFB လေဆာရောင်ခြည် diode moduleများဖြစ်သော WDM ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကား module တွေအနိမ့်တံခါးခုံကိုလက်ရှိနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရှိသည်။ လေဆာရောင်ခြည် Diode ကို InGaAs monitor PD နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော coaxial package တစ်ခုတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး single-mode pigtai land Clients များသည် 1270nm-1610nm DFB လေဆာ Diode နှင့် Pigtail နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ထံမှစက်မှုလုပ်ငန်းများမှရရှိသောစျေးနှုန်းများကိုရရှိနိုင်သည်။
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ diode ၏ 1. အကျဉ်းချုပ်
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ diode ၏ 2. နိဒါန်း
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ diode ၏အင်္ဂါရပ်များ
မြင့်မားသော output ကိုပါဝါ LD ။
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ diode ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â "ƒ)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ PO = PF 1280 1290 1300 nm
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာရောင်ခြည်၏ 6. အထုပ်ပုံဆွဲ & PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ်: မီလီမီတာ)
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ diode ကိုပို့ခြင်း၊ ပို့ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
hot Tags:: Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ Diode၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊